Fifidianana: Tsy misy laharana araka ny nampanantenaina ny bileta
Noreharehan'ny tao amin'ny CENI mihitsy fa dia avo lenta, tsy azo anaovana hosoka, toy ny vola mihitsy ity bileta tokana ampiasaina amin'ny fifidianana ity, satria dia hisy laharana manokana isaky ny bileta, izay hita amin'ny voditsosy, toy ireny billet ireny, ka efa fantatra mialoha avokoa ny laharana bileta alefa isaky ny Biraom-pandatsaham-bato, ka raha misy ny tsy milamina, dia azo jerena raha tena bileta tokony ho voatokana ho an'io birao io marina no nampiasaina, na bileta hafa nampidirina antsokosoko.
Rehefa natao anefa ny fanamarinana ireo bileta nampiasaina tamin'ity fihodinana faharoa ity, dia tsy misy laharana azo kikisana izany ireo bileta nampiasaina, sy nandaniana vola be nampanaovina tany Afrika atsimo, fa dia taratasy tsotra toy ireny famonosana mofo gasy ireny ihany.
Ka dia nivarotra ambongadiny andra-Malagasy antapitrisany mpifidy indray ve ny CENI, ka dia nofitahina hoe bileta avo lenta ity ampiasaina ity, nefa vola be antapitrisany maro no lany?
Tsy misy azo amantarana izany, na bileta hafa no nampiasaina, na ny an'ny CENI, satria dia tsy misy mampiavaka azy amin'ny taratasy tsotra. Ny voditsosy sy ny fonina karine anefa dia mazava be ny laharana, fa ny marina, ny bileta tsy misy laharana manokana.
Nanaovana famoahana manoakana na décharge mihitsy aza tamin'ny nizarana ireny bileta ireny, rehefa misy ny very, toy ny teny Ambohipo, dia nalain'ny polisy mihitsy ny gardien, ary dia nasiana PV manokana indray ny fanomezana bileta vaovao, anamarihana ireo laharana bileta ampiasaina amin'io biraom-pifidianana io.
Fifidianana nahorina eo ambony fitaka ve izany izy ity, andrasana ny fanazavana omen'ny CENI amin'ny vola be lany nanaovana izao bileta, toy ny taratasy tsotra famonosana mofo izao.